AC Milan oo xoolaha Shiinaha xiddigo weerar ah xagaaga kusoo xera gelinaysa – Gool FM
AC Milan oo xoolaha Shiinaha xiddigo weerar ah xagaaga kusoo xera gelinaysa
Raage February 20, 2017
(Milano) 20 Feb 2017 – Kooxda AC Milan ayaa diiradda saaraysa saxiixa laacibka weerarka uga dheela kooxda Real Madrid ee Karim Benzema marka la gaaro suuq-xagaaga soo aaddan oo ay kaash cusub heli doonto.
Waxaa la isla dhex marayaa in wiilkan reer Faransiis uu xagaaga ka xir xiran yahay kooxda Los Merengues, kaddib 8 sano oo uu halkaasi ku cayshayay.
Kooxda Rossoneri ayaa waxaa bilowga bisha soo aaddan, gaar ahaan 3-da Maarso la wareegi rabta dallad Chinese ah oo la yiraahdo Sino-Europe Sports, iyadoo uu calciomercato.it werinayo inay qiimaynayaan suurtagalnimada ay ku heli karaan Benzema.
Yeelkeede, ma aha laacibka qura ee ay AC Milan doonayso ee weerarka dhexe ama weerarkaba ka dheeli kara, waayo waxay doonayaan hujuumka Arsenal ee Alexis Sanchez iyo Lucas Perez, sidoo kale Pierre-Emerick Aubameyang.
"Lucas Perez wuxuu doonayaa inuu katago Arsenal" - Wakiilkiisa oo hadlay
XULKA SERIE A: 11-ka xiddig ee todobaadkan ugu xariifsanaa Serie A-da